नवलपुर एकमा पञ्च पाण्डवको अन्तिम रस्साकस्सी
By vijayafm on	 December 4, 2017 कोरोना अपडेट, देश, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, राजनीति, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट । सोमबार राती १२ बजेपछि मौन अवधि सुरु हुने भएपछि दलहरु चुनावी प्रचारका लागि अन्तिम कसरतमा रहेका छन् । नवलपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तर्फको सदस्यका लागि ८ जना उम्मेदवार चुनावी दौडमा रहेका छन् । यस मध्ये पनि पाँच उम्मदेवारले चुनावी प्रचारस्रसारमा बढी जोड दिएका छन् । चुनावी प्रचारप्रसारको आज अन्तिम दिन भएका कारणले पनि चुनावी रणनीति र चुनावी प्रचारप्रसारमा दलहरु आज दिनभर दोड धुप र व्यस्त रहनेछन् ।
डा. शंशाक कोइराला ( नेपाली काँग्रेस )
आफूलाई भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी गर्ने डा. शंशाक कोइरालाले अहिले नवलपुर क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री रहेका नेता शशांक कोइराला कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिनुहुन्छ । २०६४ सालको चुनाव र २०७० सालको चुनावमा नवलपरासीबाट सांसद बन्नुभएका नेता शशांक कोइराला २०७२ सालको महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा चयन हुनुभएको हो । नवलपुरको समृद्धिको सपना बोकोर नवलपुर आएको कोइरालाको भनाई छ ।
नवलपुरमा नेपाली कांग्रेशले गैंडाकोट १ बाघखोरमा चुनावी सभा गरेको छ । महामन्त्री डा. शंशाक कोइराला, कृष्णचन्द्र नेपाली, तिलक सापकोटा लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । यस्तै गैँडाकोट ९ मा पनि नेपाली काँग्रेसले चुनावी कार्यक्रम गरेको छ । यसैगरी गैँडाकोट १०, ११, १२ र १३ मुकुन्दपुरमा चुनावी कोण सभा गर्दैछ । यसैगरी आजै देवचुली ४ झाँक्रेमा कार्यक्रम हुँदैछ । डा. कोइरालाले नवलपुरको चुनावी अभियान सकेर तनहुँमा काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने चुनावी सभामा पुग्ने क्षेत्रीय सभापति द्रोणवनले जानकारी दिनुभयो ।
भबिश्वर पराजुली ( बाम गठबन्धन)
२०४७ सालबाट नेकपा मशालको राजनीति सुरु गर्नुभएका पराजुली २०७१ सालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुहुन्छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागि सकेका पराजुली पहिलो पटक निर्वाचनमा देखिनुभएको हो । पराजुली यस पटक २ पटक निर्वाचन जितेका काँग्रेस महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा कोइरालाको प्रतिद्धन्दिको रुपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । पराजुलीले निर्वाचन प्रचारप्रसारको आज अन्तिम दिन हर्दिमा चुनावी सभामा सम्बोधन गर्नुभएको छ । यसैगरी दिउँसो भृकुटी चोकमा हुने कार्यक्रममा पनि कोइराला र धनप्रसाद सापकोटाले सम्बोधन गर्ने कार्र्यक्रम रहेको माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ । कावासोतीमा पनि पराजुली पुग्ने कार्यक्रम छ । यसैगरी देवुचली झाँक्रेमा पनि प्रदेश सभा उम्मेदवार सूर्य न्यौपानेको चुनावी कार्यक्रम रहेको छ । आजै बुलीङटार र कोटथरमा पनि बामगठबन्धनले कार्यक्रम राखेको छ ।
कृष्णप्रसाद गौतम ( नयाँ शक्ति)
नवलपुर क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा बढीरहेको युवा पलायनलाई निरुत्साहित पार्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिने अभियानका साथ नयाँ शक्तिले नवलपुर क्षेत्रमा चुनावी अभियान तीव्र पारेको छ । नयाँ शक्तिका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद गौतम र प्रदेश सभाका उम्मेदवार सरोज खरेलल गैँडाकोट, रजहर, देवचुली र कावासोती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा घरदैलो कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
गोपाल गिरी (राष्ट्रिय जनमोर्चा)
राष्ट्रिय जनमोर्चाले बामगठबन्धनसंग आफूहरुको कुनै पनि कार्यगत एकता नभएको जनाएको छ । चुनावी अभियानमा रहेका बेला ठाउँठाउँमा बामगठबन्धनले राष्ट्रिय जनमोर्चासंग एकता भएको भन्दै भोट आफूहरुलाई दिन भन्दै हिँडेको पाइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका समानुपातिक उम्मेदवार कुलप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि गठबन्धनसंग सम्झौता नगरेको र भोट आफूहरुलाई दिन आग्रह गरेको छ । बामगठबन्धनका कर्तुतहरुबाट सचेत बन्न समेत नवलपुर बासीसंग आग्रह गरीएको पाण्डेले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गोपाल गिरि प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि चुनावी दौरानमा रहनुभएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको आजको चुनावी कार्यक्रम हर्दिदेखि सुस्तासम्म राखिएको पाण्डेले बताउनुभयो ।
हरिप्रसाद गौतम ( विवेकशील साझा )
विवेकशील साझा पार्टीले पनि आज विभिन्न स्थानमा चुनावी कार्यक्रम गरेको छ । नवलपुर क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हरिप्रसाद गौतम उम्मेदवार रहनुभएको छ । गौतम युवा उम्मेदवारका रुपमा, राजनीतिमा नैतिकता ल्याउने उद्घोष गर्दै चुनावी कार्यक्रममा जुट्नुभएको छ । विवेकशील साझा पार्टीले आज गैँडाकोट, देवचुली, रजहर, कावासोती, लगायतका क्षेत्रमा चुनावी कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसारका लागि आज अन्तिम दिन हो । राजनीतिक दल र विभिन्न उम्मेदवारले आज मध्यरात १२ बजेसम्म प्रचार गर्न पाउने छन् । मध्यरात १२ बजेपछि मौन अवधि शुरु हुनेछ । मौन अवधिमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, समाजिक सञ्जालसमेतमा पनि प्रचार गर्न पाइने छैन । सोमबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुने भएकाले दलका नेता र उम्मेदवार सोमबार अन्तिम चरणको प्रचारमा जुट्ने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दिनभर गृहजिल्ला डडेल्धुराको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुने कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने आज काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ र भक्तपुर क्षेत्र २ को कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवनमा नै व्यस्त हुनुहुनेछ । यसैबिच सोमबारसम्ममा सबै मतदान केन्दमा कर्मचारी पुगिसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । दोश्रो चरणमा चुनाव हुने सवै क्षेत्रमा सोमबारसम्म कर्मचारी पुगिसक्ने र मंगलबार र बुधबार मतदाता परिचयपत्र वितरण गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।